प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन — Aarthiksansar.com
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन
पुनर्गठित मन्त्रीले लिए सपथ
आर्थीकसंसार संवाददाता२१ जेठ, २०७८
२१ जेठ, २०७८
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा ३ जना उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्री रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हाल मन्त्रिपरिषदमा रहेका चार मन्त्री बाहेक बाँकी सबै मन्त्रीलाई हटाएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेम्वाङ बाहेक सबै मन्त्रीलाई हटाएका छन् । बाहिरिने मन्त्रीमध्ये उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली पनि रहेका छन्् ।
पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा विष्णु पौडेल उपप्रधानसहित अर्थ, रघुवीर महासेठ उपप्रधानसहित परराष्ट्र र राजेन्द्र महतो उपप्रधानसहित शहरी विकास मन्त्री बनेका छन् । उनीहरूले आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन् ।
त्यस्तै बसन्त नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षा र लीलानाथ श्रेष्ठ कानुन मन्त्रीका रुपमा यथावत रहनेछन् । शेरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट महतोबाहेक ७ जनाले मन्त्री र २ जनाले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, अनिल झा खानेपानी तथा सरसफाई, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेका छन् । यस्तै विमल श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अरगरिया वन तथा वातावरण, चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, एकवाल मियाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका छन् । यस्तै चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा र रेणुका गुरुङ महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री बनेका छन् । उपेन्द्र यादवको साथ छोडेका विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया र रेणुका गुरुङले सरकारमा जाने मौका पाएका हुन् ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा, गृह, पर्यटन, सञ्चार, सामान्य प्रशासन, कृषि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफैसँग राख्ने भएका छन् । हाललाई यी सबै मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने भएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा समावेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन् । त्यसका लागि मौजुदा मन्त्रिपरिषदबाट एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन मन्त्रीलाई हटाएका छन् ।
को को बाहिरिए ?
मन्त्रिपरिषदबाट एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलसहित ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री बाहिरिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिकमन्त्री भानुभक्त ढकाल, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे विदा भएका छन् ।
यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेश गठुन्ना, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतो पनि विदा भएका छन् ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज राउत, सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र उद्योग राज्यमन्त्री विमला विक पनि सरकारबाट विदा भएका छन् ।
यस्तो छ मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली : रक्षा, गृह,सञ्चार, पर्यटन, कृषि, उद्योग वाणिज्य र सामान्य प्रशासन।
विष्णु पौडेल : उपप्रधानमन्त्री, अर्थ
राजेन्द्र महतो : उपप्रधानमन्त्री, शहरी विकास
रघुवीर महासेठ : उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र
शेरबहादुर तामाङ : स्वास्थ्यमन्त्री
कृष्णगोपाल श्रेष्ठ : मन्त्री, शिक्षा
बसन्तकुमार नेम्वाङ : मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
लीलानाथ श्रेष्ठ : मन्त्री, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला
शरतसिंह भण्डारी : मन्त्री, ऊर्जा
अनिल झा : मन्त्री, खानेपानी तथा सरसफाई
विमल श्रीवास्तव : श्रम तथा रोजगार
उमाशंकर अरगरिया : मन्त्री, वन तथा वातावरण
लक्ष्मणलाल कर्ण : मन्त्री, भूमि व्यवस्था
चन्दा चौधरी : मन्त्री, महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
एकवाल मियाँ : मन्त्री, युवा तथा खेलकुद
चन्द्रकान्त चौधरी : राज्यमन्त्री, ऊर्जा
रेणुका गुरुङ : राज्यमन्त्री, महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
गरिमा बैंक र केसीएल अस्ट्युट क्यापिटलबीच सम्झौता
ग्लोबल बैंकले पेन्सन होल्डरलाई सहज कर्जा दिने
थपिए २ हजार ६०७ जना कोरोना संक्रमित
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा सगरमाथा आरोहण दललाई हस्तान्तरण आर्थिक सहयोग
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ निष्काशन गर्न प्रस्ताव पारित
राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत कर्मचारी बोलाएर बैंक खोल्ने व्यवस्था हटायो
नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सले ५ दिनमै दियो मृत्यु दावी भुक्तानी
माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकले कार्डबाट पेमेन्ट गर्दा १५ प्रतिशतसम्मको छुट पाउने
मेगा बैंकका ग्राहकले मोबाइलबाटै २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पाउने
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओमा पवनकुमार खड्का नियुक्त
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको २७औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
विकास बैंकले पनि सरकारी कारोबार गर्न पाउनुपर्छ: अध्यक्ष पोखरेल
उद्योग वाणिज्य महासंघको कोभिड सहायता केन्द्रबाट सङ्क्रमित लाभान्वित
स्टार्ट अप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रमसम्बन्धी गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन
शैक्षिक प्रमाणपत्र हातमा लिएर जाँदैमा २५ लाख रूपैयाँ ऋण पाइँदैनः गभर्नर अधिकारी
नेपाल बङ्गलादेश बैंक २७औं वर्षमा प्रवेश
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुन्छौंः उपप्रधानमन्त्री पौडेल